Showing १०१-११० of १,११७ items.
लकडाउनले मित्रतामाथि सङ्कट
भिक्टोरिया गिल बीबीसी / "यदि तपाईँले मित्रतामा ध्यान दिनुभएन भने त्यो चाँडै नै बिग्रिन सक्छ - तीन महिनाभित्र," प्राणीको जीवन विकासक्रमसम्बन्धी मनोविज्ञानविद् प्राध्यापक रबिन डुन्बार भन्छन्। त्यसैले लकडाउनको सामाजिक दबाव छोटै भए पनि त्यसले केही मित्रतामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने उनी बताउँछन्। रोयल सोसाइटी जर्नलमा एक लेख प्रकाशित गर्दै प्राध्यापक डुन्बारले कसरी लकडाउनले हाम्रा सामाजिक सम्पर्क परिवर्तन गर्नेछन् भन्नेबारे अध्ययन गरेका छन्। अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालयका यी विज्ञले औँल्याएका असरको जरा जूम वा ह्वाट्स्याप समूहभन्दा पर छन्। उनी भन्छन्ः मानिसको मित्रताको जरा गैरमानव
बार्सिलोना छाड्न मेस्सीले दिए पत्र
धरान । बार्सिलोनाबाटै खेल जीवनको अन्त्य गर्न चाहेका अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेस्सी एकाएक क्लब छाड्न खोजेको खबर बाहिरिएको छ । यतिसम्म कि उनले बार्सिलोनालाई क्लब छाड्न चाहेको पत्र नै पठाइसकेको चर्चा छ । यस सिजनमा निकै खराब समय बेहारिरहेको बार्सिलोनाले युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिकसँग ८–२ को लज्जाजनक पराजय भोगेको थियो । त्यसयता मेस्सी निकै चिन्तित देखिन्थे । उनी क्लबको पहुँचबाहिर रहेका छन् । उनले आफ्नो खेल जीवनको निकै महत्त्वपूर्ण समय बार्सिलोनाका लागि खर्चेका छन् । तर, हालै बाहिरिन चाहेको उनका वकिलहरूले क्लबसँग भएको करारमा ‘जान दिन मिल्ने
प्रकाशित मितिः भदौ १०, २०७७
अमेरिकामा 'प्लाज्मा थेरापी' उपचारलाई अनुमति
अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि प्रशासनसम्बन्धी नियामक निकाय एफडिएले कोरोनाभाइरसबाट निको भएकाहरूको रगतको प्लाज्मा तत्व अन्य बिरामीका लागि प्रयोग गर्न आकस्मिक अनुमति दिएको छ। निको भएकाहरूको रगतको प्लाज्मामा भाइरस विरुद्ध बनेका एन्टीबडीलाई अरू बिरामीमा प्रयोग गरिने यो विधि हजारौँ मानिसमा प्रयोग गरिसकिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ह्वाइटहाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै एफडिएले प्लाज्मा थेरापीको प्रयोगलाई अनुमति दिएको समाचार सुनाएका थिए। प्लाज्मा दान गर्न अपिल उक्त घोषणा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले यो विधिको प्रयोगमार्फत् कोरोनाभाइरसबाट हुने मृत्यु ३५ प्रतिशत कम हुने बताएका छन
भोजराज श्रेष्ठ/धरान फ्रेञ्च लिग वान विजेता पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) लाई १–० गोलले हराउँदै छैटौं पटक जर्मन क्लब बायर्न म्युनिख च्याम्पियन्स लिग विजेता बनेको छ । सन् २०१२–१३ को सिजनबाट उपाधि जित्न नसकेको बायर्नले २५ वर्षपछि सेमिफाइनल पार गरेर इतिहास बनाएको पीएसजीको सपना चकनाचुर बनाइदिएको हो । दुई स्टार नेयमार जुनियर र केलियन एम्बाप्पेको सपनामाथि बायर्नले ५९ औं मिनेटमा किङ्ग्सले कोमनको गोलबाट ध्वस्त बन्यो । किङ्ग्सले ती खेलाडी हुन्, जसले आफ्नो व्यवसायिक फुटबलको क्यारियर पीएसजीबाटै सुरु गरेका थिए । विगतको आफ्नै क्लबमाथि उनले हेडमार्फत् गोल गरेका हुन् । जसले बायर्नको छैटौं
धरान । एउटा चस्मा २ सय ५५ करोडमा बिक्री भयो भन्दा पत्यार नलाग्ला ! तर, अमेरिकाका एक व्यापारीले २ सय ५५ करोड खर्च गरेर चस्मा खरिद गरेका छन् । यति महँगो मूल्यमा बिक्री भएको चस्मा अरू कसैको नभई महात्मा गान्धीको ऐतिहासिक चस्मामा ती व्यापारीले सो मूल्य हालेका हुन् । केही दिनअघिदेखि उक्त चस्मा बिक्रीका लागि राखिएको थियो । बीबीसी हिन्दी सेवाका अनुसार ब्रिस्टल आक्सन्स नामक लिलामी एजेन्सीले महात्मा गान्धीको चस्मा २ सय ५५ करोडमा बिक्री गरेको हो । यो चस्मा अमेरिकाका एक कलेक्टरले खरिद गरेको उसले जनाएको छ । ब्रिस्टललाई यो चस्मा अगस्ट ३ तारिखका दिन अज्ञात व्यक्तिले सामान्य चिठ्ठीपत्रमा छाडेको अवस्थामा फेला
अमेरिकाकाे फ्लाेरीडामा ७५ कराेड लामखुट्टे छाेडिने
ब्लाष्टखबर । अमेरिकाकाे फ्लाेरीडामा ७५ कराेड लामखुट्टे छाेडिने भएकाे छ । उक्त लामखुट्टेकाे स्थानीय प्रजातिको सङ्ख्या कम गर्न वंशाणुगत संरचनामा परिवर्तन गरिएका वीवीसीले उल्लेख गरेकाे छ । प्रकृतिमा छाेडिने ती लामखुट्टेले डेङ्गी र जीका भाइरसजस्ता रोग सार्ने लामखुट्टेको सङ्ख्या कम गर्ने अपेक्षा गरेका फ्लाेरीडाका अधिकारीउरूलाइ उद्ध्रित गर्दै वीवीसीले समचारमा उलेख गरेकाे छ । त्यहाँकाे वातावरणवादी समूहहरूले उक्त कार्यकाे विराेध गरेकाे छन् । उनिहरूले साेचिएकाे भन्द उल्टाे असर गर्न सक्ने वा अन्य प्रकृतिक परिवर्तन या असर गर्न सक्ने भन्दै विराेध गरीरहेका छन् । गत मे महिनामा अमेरिकी व
लालुप्रसाद यादवलाई बिहारको विधानसभा चुनाव अगावै झट्का, आफ्नै सम्धी जेडियुमा
धरान । भारतको बिहार राज्यमा विधानसभाको चुनाव हुनुअगावै महागठबन्धनलाई गम्भीर झट्का लागेको छ । हिन्दुस्तान आवाम मोर्चा (हम) ले स्वस्फूर्त रूपमा महागठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गरेसँगै महागठबन्धनलाई विधानसभा पूर्व नै झट्का लागेको हो । यसअघि जनता दल युनाइटेड (जेडियु) लाई पनि गम्भीर धक्का लागेको थियो । जितन राम माँझीको पार्टी हमको सचिवालय कमिटीले महागठबन्धनबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको हो । जितनरामको पार्टी पुनः जेडियुसँग जोडिन सक्ने अनुमान लगाइदै छ । हमले जेडियुसँग पछिल्लो केही महिना यतादेखि गठबन्धन गर्ने विषयमा व्यापक छलफल चलाउँदै आइरहेको बुझिएको छ । जेडियुले भने हम पार्टी आफ्नो पार्टीमा विलय भए
प्रकाशित मितिः भदौ ४, २०७७
भाजपाका विधायक महेशसिंहविरुद्ध बलात्कारमा मुद्दा दर्ता, डिएनए टेष्ट गर्न माग
धरान । भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विधायक महेश सिंह नेगीविरुद्ध एक महिलाले बलात्कारको आरोप लगाउँदै प्रहरीमा निवेदन दिएकी छन् । ती महिलाले विधायक नेगीको डिएनए परीक्षण गराउनसम्म माग गरेकी छन् । उनले आफूसँग रहेको बच्चाको पिता नेगी रहेको पुष्टि गर्नका लागि डिएनए परीक्षण गर्न माग गरेकी हुन् । भारतको उत्तराखण्डको राजधानी देहरादुनकी ती महिलाले नेगीविरुद्ध बलात्कारको आरोप लगाउँदै प्रहरीमा उजुरी दिएकी हुन् । नेगी अल्मोडा जिल्लाको द्वाराहाटबाट भाजपाको विधायक बनेका थिए । तर, उनले आफूविरुद्ध लागेको आरोप झुटो र आधारहीन रहेको दाबी गरेका छन् । भारतीय मिडिया दी वायरका अनुसार १६ अगस्टका
धरान । भारतका महान शास्त्रीय गायक पण्डित जसराजको ह्रदयघातका कारण अमेरिकामा सोमबार बिहान मृत्यु भएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीपछि सुरु भएको लकडाउनका कारण उनी अमेरिकाको न्यूजर्सीमा नै रहेका थिए । गायक पण्डित जसराजका छोरी दुर्गाले सोमबार बिहान मृत्यु भएको आधिकारिक जानकारी दिइन् । उनको अमेरिकी समय ५ बजेर १५ मिनेटमा ह्रदयघातका कारण मृत्यु भएको परिवारले जानकारी दिएको छ । परिवारले लेखेको छ,–‘दुःखको साथ भन्नु परिरहेको छ, शास्त्रीय संगीतका हस्ती पण्डित जसराज ह्रदयघातका कारण मृत्यु भएको छ ।’ उनको ९० वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । गत जनवरीमा मात्रै उनले ९० औं जन्मदिन बाँडेका थिए । उनल
टिकटक र इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्ने पाँच युवतीहरू किन जेल परे
'हामी पूरै स्तब्ध भयौँ । उनले गल्ती गरेकी थिइनन्, मेरी बहिनी अपराधी होइनन्,' रहमा अल-अधामले सामाजिक सञ्जालमा प्रख्यात भएकी आफ्नी बहिनीबारे भनिन्। बाइस वर्षीया मवादालाई इजिप्टमा पारिवारिक मूल्य र मान्यताविपरीत कार्य गरेको भन्दै गत महिना दुई वर्षको लागि जेल सजाय सुनाइएको थियो। उनलाई टिकटक र इन्स्टाग्राममा गीत गाए जस्तो अभिनय गरेर र चलनचल्तीका परिधान लगाएर नाचेको भिडिओ प्रकाशित गरेको हुनाले गत मे महिनमा पक्राउ गरिएको थियो। अभियोजनकर्ताहरूलाई उनका भिडिओ अभद्र लाग्यो। मवादाका टिकटकमा ३० लाख र इन्स्टाग्राममा १६ लाख फलोअर छन्। 'द टिकटक गर्ल्स' मवादा र अन्य चार युवतीहरूलाई झन्डै २०,००० अमेरिकी डल
५६७ पटक पढिएको